सावधान! : अनलाइनबाटै हुन्छ हुन्डीको यस्तो कारोबार
ARCHIVE, NEWSPAPER » सावधान! : अनलाइनबाटै हुन्छ हुन्डीको यस्तो कारोबार
अमेरिका जाने प्रलोभनमा काठमाडौंका एक युवक ठगिए । एक अमेरिकन व्यक्तिले उनीबाट ६ सय ६० डलर हात पारे । पैसा लिएपछि ती व्यक्ति बेपत्ता भए । ठगिएका युवक उजुरी लिएर महानगरीय अपराध महाशाखा टेकु पुगे । तर, पैसा लिने व्यक्ति को हुन् भन्ने उनलाई नै थाहा छैन । किनकि उनले पैसा पठाउन अवैध रूपमा अनलाइन गेटवे प्रयोग गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अनलाइन कारोबारका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विभिन्न समूहहरू बनाइएको छ । सोही समूहबाट पेपाललगायत अकाउन्टहरू खरिदबिक्रीसमेत हुने गरेको छ । पेपाललगायत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा बस्ने व्यक्तिहरूको अकाउन्ट अस्वीकार गर्ने भएकाले विदेशमा बस्ने व्यक्तिले अकाउन्ट खोलेर बेच्ने गर्दछन् । त्यस्तै, पेपाललगायत अकाउन्टमा भएको ब्यालेन्सको समेत खरिदबिक्री हुने गरेको छ । सोही समूहले बिटक्वाइनको समेत कारोबार गर्ने महाशाखाका एसपी श्याम ज्ञवालीले बताए । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा ग्रुपहरू बनाएर डलरको अनलाइन किनबेच हुने गरेको महाशाखाका एसपी ज्ञवाली बताउँछन् । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले पेमेन्ट सिस्टमलाई नियमन हेर्न पेमेन्ट सिस्टम विभाग नै गठन गरेको छ । उक्त विभागले अनलाइनबाट हुने अवैध कारोबारमाथि अनुगमन थालेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।
बैंकहरूद्वारा अनुमतिविनै कारोबार
हालसम्म नेपालमा बैंकहरूले सञ्चालन गर्दै आएको इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्डलगायतको सेवासमेत कानुनतः अवैध छन् । वर्षौँदेखि यस्तो सेवा दिँदै आएका ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबारका लागि हालै मात्र आवेदन दिएका छन् । बैंक–वित्तीय संस्थाबाट अन्य ४० वटा कम्पनीले पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका हुन् । लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई नियमित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत विदेशी विनिमय विभाग स्थापना गरिएको छ । तर, विभागले अनुगमनको काम राम्रोस“ग गर्न नसक्दा अनलाइनबाट अवैध डलर कारोबार बढेको छ ।